I-China Shop Front Sign yabakhiqizi besitolo se-KH24H nabathengisi | UZhengcheng
Isicelo: Isitolo esikahle, isitolo sekhofi, isitolo sekhekhe, isuphamakethe, isitolo sokuthengisa ekhemisi
Sinamathela kumgomo oyinhloko wokwanelisa izidingo nezidingo zamakhasimende ukwenza wonke umkhiqizo. Ibhokisi ngalinye elikhanyayo kufanele lidlule ekuhlolweni okuningi kokubukeka, ukwakheka, ukungena kwamanzi kanye nothuli-anti, omiyane, ukufakwa okusheshayo nokugcinwa, nokonga amandla. Ukuxazulula izinkinga zokumelana nomoya, ukuvuza, ukuvuza okuncane, ukushisa kokushisa, ukuvala uphawu, ukugqwala komoya olwandle ezindaweni ezingasogwini, ukungcoliswa kwemvula ene-asidi, kanye nemisebe ye-ultraviolet enamandla. Sifaka ukubaluleka kokusebenzisa ukuphepha, ukuphepha kwesakhiwo, ukuphepha kokukhiqiza, ukuphepha kwempahla nokuphepha kokwakha, nokuhola ekwakheni amazinga wokumiswa kwemboni.
Kungani ukhetha imikhiqizo yethu?
1.Zhengcheng ngokukhethekile ekwenzeni umnyango-ikhanda izibani ibhokisi ukukhanya, ne ocebile ukukhiqizwa isipiliyoni kanye esebenza kahle iqembu ukukhiqizwa.
2. Inkampani yethu inabaqambi abangochwepheshe abahlinzeka ngezikimu zokwakha ngokuya ngezidingo zamakhasimende. Ngasikhathi sinye, umklamo wethu umahhala.
3. Inkampani yethu inomugqa ophelele wokukhiqiza, ohlinzeka ngezinsizakalo zamakhulu emikhiqizo, futhi ukwakheka kwemikhiqizo okungahlangabezana nezidingo zamakhasimende zokuvula isitolo esisheshayo kanye nokubeka impahla.
4. Ibhokisi lokukhanya lenziwe ngoshidi we-acrylic osezingeni eliphakeme, ophikisana ne-ultraviolet, ukuzinza okuqinile, kanye nokuhanjiswa okuhle kokukhanya. Ngeke iguqule umbala nokukhubazeka ngemuva kweminyaka engu-3-5 isetshenzisiwe, futhi inempilo ende yokusebenza.
Ibhokisi elikhanyayo lingumklamo we-modular, ongafakwa futhi usetshenziswe ezitolo zakhona ngaphandle kokuthinta umphumela wokusetshenziswa.
Langaphambilini Uphawu lwangaphambili lwesitolo sokuthengisa
Olandelayo: Uphawu lwesuphamakethe lwangaphandle lweChaoshifa
Izimpawu Ezikhanyisiwe, Umshini Owenza Ibhokisi Elikhanyayo Lebhodi Lesibonakaliso, I-Blister Light Box Signboard, Izimpawu Zokukhangisa, Ibhodi lokungena elingaphandle le-Light Light, I-Pharmacy Signboard,